Wararka - Sidee loo iibsadaa burush rinjiyeynta artiest artiest ee bilowga ah?
Sidee loo iibsadaa burush rinjiyeynta artiest artiest ee bilowga ah?
Sidee bilowgu u iibsadaan burush rinji farshaxan-biyood? Kuwa soo socdaa waa cabiro muhiim ah oo aan soo koobay markii aan iibsanayay burushkan.
Marka hore, qaabka burushka
Guud ahaan, burushka wareega ayaa loo isticmaalaa inta badan. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa loo qaybin karaa, sidaa darteed halkan ku faahfaahin maayo. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa in qalinka caarada inta badan ay kuxirantahay caloosha qalinka si loo go'aamiyo haynta biyaha, iyo qaabka nib uu go'aaminayo caarada qalinka.
Midda xigta waa buraashka caarada fidsan, oo fidiya isla markaana leh burush saf ah. Waxaad iibsan kartaa laba buraash flat-tip, mid yar iyo hal tiro aad u tiro badan oo u kala soocan, kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu sameeyo sawirro muuqaal ah. Burushka safka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu faafiyo biyaha (warqad kor u qaadista ama rinjiyeynta qoyan). Guud ahaan, waxaad dooran kartaa qaab 16K ballaaran ama waxyar ka ballaaran.
Waxa kale oo jira qaabab kale, sida qaabka marawaxadaha, qaabka carrabka bisad, qaab daab, iwm, kuwaas oo aan aad loo isticmaalin, guud ahaanna aan u baahnayn inay iibsadaan.
Marka labaad, cabirka burushka (dhererka iyo ballaca)
Ta saddexaad, cabirku waa wax qof kastaa ka fikiri karo. Sidii aan ugu iibsaday taxane qalin qallooc ah 0 ilaa 14 Sakura bilowgii, waxaa jira kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar. Markaad wax sawirtid ka dib, waxaad ogaan doontaa inay jiraan laba qalin oo aad si joogto ah u isticmaasho.
Tusaale naftayda u soo qaad. Had iyo jeer waxaan ku rinjiyeeyaa qaab 16K mararka qaarkoodna 32K. Marka hadday tahay burushka reer galbeedka, badanaa waa No. 6 iyo No. 8, oo macnaheedu yahay ballaca (dhexroorka) qalinku waa 4-5 mm, dhererka qalinkuna waa 18-22 mm. Burushka qaranka, Xiuyi waa 4mm balac iyo 17mm dheer, sidoo kale waxaa lagu qalabeyn karaa qalin 5mm sida Ye Chan, Ruoyin iyo wixii la mid ah.